Yiba ngumThengisi we-Bitcoin | Paxful
Yiba ngumthengisi we-Bitcoin ku-Paxful
Yenza umvuzo ngokuthengisa i-Bitcoin ku-Paxful usebenzisa iindlela zethu zokubhatala ezingaphezu kwe-350
Ngo-Paxful, qalisa ishishini lakho ngemizuzu nje embalwa. Yila amaxabiso nge-Bitcoin yakho, misela iimajini zengeniso, uze uyile amava abathengi awodwa ukuze wandise iingeniso zakho. Bhalisa njengomthengisi namhlanje uze uyile ixabiso lakho lokuqala*
Iseti yeefitsha ezifanelekileyo zokulawula urhwebo lwakho, amaxabiso, nobalo
Ngaphezu kwe 6 miliyoni zabasebenzisi ababhalisiweyo ehlabathini jikelele
Ithenjwa ngabangaphezu kwe 12 000 yabathengisi be-Bitcoin ababhalisiweyo
Inkxaso epheleleyo yamava orhwebo angenamagingxiginxi
Zisa i-Bitcoin yakho ku-Paxful uze uyithengise ukuze ufumane ingeniso
350+ iindlela zokubhatala
iindleko zentengiselwano 0-2%
Inkxaso ye-VIP kubathengisi abanevolyum ephezulu
Ushwankathelo lwentengiselwano neengeniso
Inkqubo yehlakani ukuze lifake abathengisis abatsha ize wandise ishishini lakho
Rhweba ku-Paxful uze uqalise ishishini lakho le-fintech
Ixabiso langoku le-Bitcoin:
1. Yila okanye khangela ixabiso
Ungabhrawuza okanye uyile amaxabiso kokubini awokuthenga nawokuthengisa i-Bitcoin. Seta amaxabiso akho, fumana iqabane lokurhweba, wenze intengiselwano yakho yokuqala namhlanje.
2. Yakha iprofayile yakho
Fumana abathengi ngokwenza uqinisekiso, ufake umfanekiso weprofayile, uze uqokelele uluvo oluhle. Ukuba nembali yorhwebo ende nentle kunyusa udumo lwakho kuze kukuncede ube nokuthenjwa ngabo banokubangabathengi.
3. Rhweba uze ufumane iingeniso
Thenga phantsi, thengisa phezulu. Esi sisiseko somzekelo omhle weshishini kwaye siyavuma. Funda okungakumbi mayela nemigangatho yethu yokurhweba ku-Paxful, ngokusuka kwiziko loncedo.
Hlala usazi, nanini na, naphi na
Sukhathazeka ngokuba uza kuphoswa lurhwebo, okanye imiyalezo esuka kubathengi. U-Paxful kulula ukumsebenzisa yaye uyasebenza kuzo zonke izixhobo zakho. Ii-apps zethu ze-iOS kunye ne-Android, ziza kuqiniseka ukuba usoloko usazi kwaye ulungele ukusebenza.
Yiba nomvuzo ongakumbi ngeNkqubo yeHlakani yakwa-Paxful
Inkqubo yeHlakani yakwa-Paxful yayilelwa ukukunceda unyuse umvuzo wakho ngokumema abahlobo bakho, usapho, kunye nenethwekhi ayandisiweyo kwiplatfomu yethu.
Ingeniso yangoko nangoko kuRhwebo Ngalunye:
50% yemali yehlakani leNqanaba 1
10% yemali ebhatalwe ngamahlakani abo kwiNqanaba lesi-2
* Uyaqonda yaye uyavuma ukuba u-Paxful akaboneleli ngamacebiso ezomthetho, erhafu, okanye otyalo-mali, ibe xa ubona kuyimfuneko, uza kubonana nengcali efanelekileyo ngokokubona kwakho ngaphambi kokusebenzisa iplatfomu yomhlobo kumhlobo ka-Paxful uze ube ngumthengisi. Nceda ukhumbule ukuba indlela owenze ngayo kwixesha elidluleyo ayithethi kuthi uza kwenza njalo kwixesha elizayo. U-Paxful akaqinisekisi okanye akathembisi nto ngendlela ozokwenza ngayo ngokwezimali okanye imiphumo oza kuyifumana ngokuba ngumthengisi wakwa-Paxful kwaye uyaqonda futhi uyavuma ukuba zonke izigqibo zokusebenzisa iplatfom yomhlobo kumhlobo yakwa-Paxful zezakho ngokupheleleyo. Uyaqonda kwaye uyavuma ukuba asibophelelekanga nangayiphi na indlela, kwaye asinambopheleleko kuwe ngokuphathelele, izigqibo zakho. Uyaqonda kwaye uyavuma ukuba akukho neyiphi imeko apho ukusebenzisa iplatfom yomhlobo kumhlobo yakwa-Paxful nokuba ngumthengisi kwenza kubekho unxulumano oluquka ukubonelelwa ngamacebiso otyalo-mali.